A Hapụtụrụ Ụmụnna Anyị Ka Ha Kwusaa Ozi Ọma na Dọminikan Ripọblik | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
A Kagburu Iwu Ahụ A Machiri Anyị
Onye a bụ Nwanna Manuel Hierrezuelo. E gburu ya mgbe ndị ọchịchị na-agba ya ajụjụ
N’oge niile ahụ gọọmenti na-achọghị iji anya ahụ Ndịàmà Jehova, e nwere ndị ozi ala ọzọ nọgidere n’ozi ha. Ha bụ Nwanna Lennart Johnson na nwunye ya Virginia nakwa Nwanna Roy Brandt na nwunye ya Juanita. Nwanna Lennart sịrị: “Ndị ọchịchị kpọrọ mụ na Nwanna Roy Brandt ka ha gbaa anyị ajụjụ. Ha akpọbuola Nwanna Manuel Hierrezuelo ka ọ bịa hụ ha.” Ọ dị mwute na e gburu ya mgbe a na-agba ya ajụjụ. O fere Jehova ruo mgbe ọ nwụrụ. Oleekwanụ ihe mere mgbe Nwanna Lennart na Nwanna Roy gara ịza òkù ndị ọchịchị kpọrọ ha? Nwanna Lennart kwuru, sị: “Mgbe anyị rutere, ha jụrụ anyị ajụjụ iche iche. Ọ dịkwa ka hà tinyere ihe ndị anyị kwuru na teepụ. E nweghịzi ihe ọzọ merenụ n’ụbọchị ahụ. Mgbe ọnwa abụọ gachara, akwụkwọ akụkọ dị iche iche kwuru na Trujillo akagbuola iwu ahụ a machiri anyị nakwa na anyị nweziiri onwe anyị ikpe okpukpe anyị otú anyị chọrọ.”
Tupu afọ 1950 a machiri Ndịàmà Jehova iwu, e nwere narị ndị nkwusa abụọ na iri isii na otu na Dọminikan Ripọblik. Ma, mgbe e wepụrụ iwu ahụ n’Ọgọst afọ 1956, e nweziri narị ndị nkwusa ise na iri abụọ na abụọ. Obi tọrọ ụmụnna anyị ezigbo ụtọ mgbe a gwara ha na ha nweziri ike ịna-ezi ndị mmadụ ozi ọma n’enweghị onye ga-enye ha nsogbu. N’oge ahụ, o meela afọ isii a tụwara ụmụnna anyị mkpọrọ ma na-egbochi ha izi ozi ọma.
Olee ihe ụmụnna anyị mere ugbu a e wepụrụ iwu ahụ a machiri ha? Ozugbo ha nụrụ ya, ha malitere ịhazi otú ha ga-esi na-ekwusa ozi ọma. Ọgbakọ dị iche iche chọtara ebe ha ga na-anọ amụ ihe, see map ókèala ndị ọhụrụ, mepeekwa faịlụ ndị ọhụrụ ha ji etinye akwụkwọ ozi ha. Obi tọkwara ụmụnna ụtọ na ha nweziri ike ịtụ ọda akwụkwọ, e zitere ha ya. Ha ji ohere a ha nwere kwusasiwe ozi ọma ike. Ọ bụ ya mere na Nọvemba afọ 1956, ndị nkwusa e nwere ruru narị mmadụ isii na iri na abụọ.
Otú Ndị Ụkọchukwu Si Gbalịa Ka A Kwụsị Anyị Izi Ozi Ọma
Ihe a bụ akwụkwọ ahụ Toledano dere nke o ji kwuo ihe ndị a ga-eme ka a kwụsị anyị ịna-ebubata akwụkwọ
Ndị ụkọchukwu Katọlik bidoro ozugbo ịkpa nkata otú ha ga-esi mebie aha Ndịàmà Jehova. Ha malitere ịkwanye gọọmenti ọkụ n’ikè ka ha memilaa Ndịàmà Jehova. Ihe nyere ha ikike ịgwa gọọmenti ka ha mee otú ahụ bụ akwụkwọ ahụ Trujillo na Vatikan bịanyere aka na ya. Onye ụkọchukwu Katọlik aha ya bụ Oscar Robles Toledano degaara otu onye nọ n’ọkwá ukwu na gọọmenti akwụkwọ. Aha ya bụ Virgilio Álvarez Pina. O kwuru ka gọọmenti nyere ya aka ná mbọ ọ na-agba “ime ka ụmụ amaala Dọminikan Ripọblik niile mara na ‘Ndịàmà Jehova bụ ndị ọjọọ.’”
Toledano kwuru na ihe mere ya ji na-agba mbọ a bụ “ka ndị mmadụ ghara ige ntị n’ozi ọma Ndịàmà Jehova na-ezi.” Akwụkwọ ahụ Toledano dere kwukwara ka gọọmenti kwụsị anyị ibubata akwụkwọ anyị, “nke ka nke, akwụkwọ ‘The Truth Shall Make You Free’ nakwa Ụlọ Nche.”
A Machiri Anyị Ọzọ Ikwusa Ozi Ọma
Ndị ụkọchukwu na ndị òtù ha ha na Trujillo so na-achị so ná ndị kpara nkata ka gọọmenti kwụsị Ndịàmà Jehova ikwusa ozi ọma. Otu nwoke bụ́ onyeisi otu òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị degaara Trujillo akwụkwọ na Jun afọ 1957. Aha ya bụ Francisco Prats-Ramírez. O kwuru, sị: “M chọrọ ịkpọ ndị mmadụ ka mụ na ha nwee nnọkọ ma kparịta otú anyị ga-esi kwụsị Ndịàmà Jehova ịna-emegharị ndị mmadụ anya na ịna-enupụrụ gọọmenti isi.”
Otu akwụkwọ kwuru na ebubo ndị ahụ e boro Ndịàmà Jehova kpara ha aka ọjọọ n’egbughị oge. Ọ sịrị: “N’oge ọkọchị afọ 1957, ebubo ndị ahụ ndị isi boro Ndịàmà Jehova gbara n’akwụkwọ akụkọ ndị a na-ebipụta na Dọminikan Ripọblik. Ha kwuru na ozi ọma Ndịàmà Jehova na-eme ka ndị mmadụ ‘na-enupụrụ gọọmenti isi, na-akpatakwa nsogbu n’obodo.’ Ozugbo o kwuchara ihe a, onye ụkọchukwu aha ya bụ Mariano Vásquez Sanz gara n’ụlọ ọrụ redio Trujillo katọọ Ndịàmà Jehova. O kwuru na Ndịàmà Jehova na-arụrụ ndị Ọchịchị Kọmunist ọrụ, nakwa na ha bụ ‘ndị ọjọọ na ndị na-agba ọchịchị mgba okpuru.’ Mgbe o kwuchara, ndị Achịbishọp aha ha bụ Ricardo Pittini na Octavio Antonio Beras gwara ndị ụkọchukwu niile ka ha mee ka ndị òtù ha ghara ige ntị ‘n’ozi nduhie Ndịàmà Jehova na-ezi.’”
Nkata ahụ ndị Chọọchị Katọlik na ndị ọchịchị gbakọrọ aka na-akpa ka a kwụsị Ndịàmà Jehova izi ozi ọma mechara nwee isi. N’ọnwa Julaị, ndị omeiwu na Dọminikan Ripọblik mere iwu ha ji machie Ndịàmà Jehova ikwusa ozi ọma. Obere oge, ndị uwe ojii na ndị ọzọ malitere ịkụ ụmụnna anyị ihe, na-emekpọkwa ha ọnụ. A nwụchikwara ụmụnna anyị dị otu narị na iri ise.